अनलाइन मास्टर स्कूल परामर्श मा: मूल कुरा
घर » भर्खरका समाचार लेखहरू » गेस्टपोस्ट » अनलाइन मास्टर स्कूल परामर्श मा: मूल कुरा
स्कूलका सल्लाहकारहरू कुनै पनि शैक्षिक सुविधाको अविश्वसनीय रूपमा महत्त्वपूर्ण अंश हुन्, र यो पाउनुपर्ने धेरै इनामदायी र चुनौतीपूर्ण स्थिति हुन्छ।
यदि तपाईं मानिसहरूलाई मद्दत गर्न र सहयोग गर्नमा रमाईलो गर्नुहुन्छ भने, स्कूल सल्लाहकारको रूपमा काम गर्नु तपाईंको लागि उत्तम काम हुन सक्छ। त्यहाँ धेरै योग्यताहरू, प्रमाणपत्र र इजाजतपत्रहरू छन् जुन तपाईंले आफ्नो क्यारियर सुरु गर्नु अघि नै प्राप्त गर्नुपर्नेछ, र स्कूल परामर्शमा एक अनलाइन मास्टर तपाईंको यात्राको उत्कृष्ट चरण हो। तपाईले पहिल्यै नै स्नातक डिग्री लिएको र अर्को चरणहरूको बारेमा सोच्दै हुन सक्छ, वा तपाइँ स्कूल सल्लाहकार बन्नको लागि तपाइँको शैक्षिक मार्गको योजना गर्दै हुनुहुन्छ। जहाँसुकै तपाईं आफ्नो क्यारियर पथमा हुनुहुन्छ, स्कूल परामर्शमा एक अनलाइन मास्टर तपाईंलाई कडा प्रशिक्षण विकल्प प्रदान गर्न सक्दछ जुन लचिलो र लागत प्रभावी छ।
स्कूल सल्लाहकार भनेको के हो?
परामर्शको क्षेत्र भित्र, त्यहाँ विभिन्न प्रकारका सल्लाहकारहरू छन् जुन बिभिन्न सेटिंग्समा र विभिन्न प्रकारका व्यक्तिहरूसँग काम गर्दछन्। स्कूलका सल्लाहकारहरूले बिभिन्न शैक्षिक सुविधाहरूमा काम गर्छन्, र विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको शैक्षिक लक्ष्यहरू र व्यक्तिगत मुद्दाहरू सहित बिभिन्न क्षेत्रमा समर्थन गर्दछन्। एक स्कूल परामर्श मा अनलाइन मास्टरहरू तपाइँलाई इजाजतपत्र परीक्षा लिनको लागि तयार गर्न मद्दत गर्दछ, जुन तपाइँले स्कूल कन्सलरको रूपमा अभ्यास गर्नु अघि पास गर्न आवश्यक छ। परीक्षा तपाईको राज्यमा निर्भर गर्दै फरक हुन्छ, त्यसैले तपाईले कहाँ अभ्यास गरिरहनु भएको छ भनेर विचार गर्दा तपाईले यसलाई ध्यानमा राख्नुहुन्छ भन्ने कुराको निश्चित हुनु महत्त्वपूर्ण छ।
स्कूलमा प्रस्ताव गरिएका प्राय: तीन मुख्य प्रकारका सल्लाहहरू छन्:
निर्देशक परामर्श - यसलाई प्रिस्क्रिप्टिभ वा सल्लाहकार केन्द्रित परामर्शको रूपमा पनि चिनिन्छ। यसमा सल्लाहकारले ग्राहक भन्दा बढी सक्रिय भूमिका खेल्छ, भूतपूर्व बढी सक्षम भएको कारण। सबै प्रयासहरू ग्राहकको समस्यामा केन्द्रित छन्।
गैर निर्देशिक परामर्श - यो परामर्श को एक प्रकार हो जहाँ परामर्श दिशा प्रदान गर्दैन, र अधिक ग्राहक केन्द्रित छ। क्षेत्र र रूपान्तरण को विषयवस्तु ग्राहकको नेतृत्वमा हुन्छ।
एक्लेक्टिक परामर्श - यो दुबै दिशात्मक र गैर-निर्देशित परामर्शको संयोजन हो, जसमा परामर्शदाता त्यति सक्रिय हुँदैनन् जति उनीहरू पहिलेका थिए, र त्यति त्यति निष्क्रिय छैनन् जस्तो उनीहरू पछिल्लोमा हुनेछन्। यो एक बहुमुखी र लचिलो दृष्टिकोण हो।
स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर तपाईंलाई परामर्श को यी प्रकार र आफ्नो बिभिन्न विधिहरूको तपाईंको समझको विकास गर्न मद्दत गर्दछ। त्यहाँ असामान्य मनोविज्ञान, समूह परामर्श र बहुसांस्कृतिक परामर्श, साथ साथै इंटर्नशिप र निवासहरूमा मोड्युलहरू छन्। स्कूल परामर्श मा अनलाइन मास्टर मा क्षेत्र को व्यावहारिक काम अनलाइन कोर्सवर्क संग जोडिएको छ, तपाइँ काम को ठाउँमा आफ्नो नयाँ कौशल र ज्ञान राख्न को लागी, उद्योग मा जडान बनाउन र घर बाट लचिलो अध्ययन गर्न को लागी।
तपाईं प्राथमिक विद्यालय सल्लाहकार बन्न सक्नुहुन्छ, विद्यार्थीहरूको जीवनको यस अविश्वसनीय महत्त्वपूर्ण विकास चरणमा उनीहरूलाई मद्दत गर्ने। यो त्यस्तो समय पनि हुन सक्छ जब सिक्ने अक्षमता वा विकृत विचारहरू स्पष्ट हुन्छ, साथ साथै कुनै पनि व्यक्तिगत वा पारिवारिक समस्याहरू हुन्छन्। इलिमेन्टरी स्कूलमा विद्यार्थीहरूले अरूसँग कुराकानी गर्न र अन्तरक्रिया गर्न सिक्छन्। इलिमेन्टरी स्कूल सल्लाहकारहरूले यो र अधिक बच्चाहरूलाई मद्दत गर्न सक्दछन् र थप उपचार वा समर्थनको लागि अन्य पेशेवरहरूलाई सिफारिश पनि गर्न सक्छन्।
हाई स्कूलका सल्लाहकारहरूले पनि अभिन्न भूमिका खेल्छन्, किनकि यो त्यस्तो समय हो जहाँ विद्यार्थीहरूमा धेरै शैक्षिक र व्यक्तिगत तनाव हुन्छ। तपाईं विद्यार्थीहरूलाई उनीहरूको अर्को शैक्षिक वा क्यारियर चरणहरूको लागि योजनाहरू विकास गर्न मद्दत गर्न सक्नुहुनेछ, साथै कुनै पनि व्यक्तिगत समस्याहरूको साथ समर्थन प्रस्ताव गर्न सक्नुहुनेछ। हाईस्कूलमा, विद्यार्थीहरूले अझै पहिचान गरीरहेका छन् र उनीहरूको पहिचान स्थापित गर्दैछन्, र स्कूलका सल्लाहकारहरूले तिनीहरूलाई हाई स्कूल छोडे पछि उत्पादक र परिपक्व व्यक्ति बन्नको लागि तयार हुन मद्दत गर्न सक्छन्।
के यो तपाईंको लागि सही भूमिका हो?
राम्रो सल्लाहकार बन्नको लागि एक निश्चित प्रकारको व्यक्ति लिन्छ, र तपाईंले आफ्नो शैक्षिक ज्ञान र व्यक्तिगत सीपहरू र गुणहरूको संयोजन प्रयोग गर्नु आवश्यक पर्दछ। परामर्शदाताहरू धेरै राम्रो श्रोता हुन् जसले आफैंको ग्राहकहरूको ठाउँमा आफूलाई राख्न सक्षम छन्, आफ्ना भावनाहरू बुझ्नको लागि। तपाईं अविश्वसनीय संगठित, आंकलन गर्न सक्षम, समन्वय र मूल्यांकन गर्न, र मैत्री र पुग्न योग्य हुन पनि आवश्यक पर्दछ। स्कूलका सल्लाहकारहरूले अक्सर धमकाउने जस्ता विषयहरूमा पाठ पनि दिन्छन्, त्यसैले यसले सिकाउने वा सार्वजनिक बोलीको केही अनुभव लिन मद्दत गर्दछ। साथ साथै प्राविधिक सीपहरू जुन स्कूल परामर्शमा अनलाइन मास्टरहरूले तपाईंलाई सिकाउँदछन्, त्यहाँ धेरै व्यक्तिगत सुविधाहरू छन् जुन एक महान स्कूल सल्लाहकार बनाउँछ।
सञ्चार - यो परामर्श को एक अविश्वसनीय महत्वपूर्ण हिस्सा हो। तपाईं काम गर्दै हुनुहुन्छ र व्यक्तिहरूको विशाल दायरासँग कुरा गर्दै हुनुहुन्छ, बिभिन्न मुद्दाहरू र आवश्यकताहरूको साथ। तपाईले आफ्नो संचार शैली र प्रविधि व्यक्तिगत अनुसार अनुकूल गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। शरीरको भाषा जस्ता संचारको गैर-मौखिक रूपहरू बुझ्न यो पनि महत्त्वपूर्ण छ, किनकि यसले तपाईंलाई एक व्यक्ति र उनीहरूले कस्तो महसुस गरिरहेको छ भन्ने बारेमा धेरै कुरा बताउन सक्छ।
टीम वर्क - तपाई स्कूल फ्याकल्टी सदस्यदेखि लिएर मेडिकल प्रोफेशनल र सामाजिक कार्यकर्ताहरू सम्म धेरै व्यक्तिहरूसँग काम गर्दै हुनुहुन्छ, त्यसैले तपाईका विद्यार्थीहरूको लागि उत्तम समाधानहरू फेला पार्नको लागि तपाईले सहयोग गर्न सक्षम हुनु आवश्यक छ। संचार यहाँ पनि खेलको रूपमा आउँदछ, किनकि तपाईंले पनि कुराकानी गर्ने तरिका अनुकूल गर्नुपर्नेछ र जानकारी अरूलाई पुर्‍याउनु पर्नेछ, किनकि तिनीहरूको पनी परामर्श ज्ञानको स्तर तपाई जस्तो छैन।
समानुभूति - यो तपाईको विद्यार्थीहरूको जुत्तामा आफैंलाई राख्न को लागी क्षमता हो कि उनीहरूले महसुस गरिरहेछन्। तपाईंसँग प्रशस्त अनुभव हुनेछ, तर यो असम्भव छ कि तपाईंसँग विद्यार्थीले ल्याएको हरेक परिस्थितिको पहिलो-अनुभव हुनेछ। समानुभूतिले तपाइँलाई तपाइँका विद्यार्थीहरूको दृष्टिकोणबाट विश्व हेर्न मद्दत गर्दछ।
संगठन - कुनै पनि प्रकारका सल्लाहकारलाई अविश्वसनीय रूपमा व्यवस्थित गर्न आवश्यक छ। एक स्कूल काउन्सलरको रूपमा तपाईसँग धेरै ग्राहकहरू छन् र तपाईले प्रत्येकलाई उस्तै स्तरको ध्यान र व्यावसायिकताका साथ व्यवहार गरेको सुनिश्चित गर्न आवश्यक छ। तपाइँ आफैंलाई बदमाशी र लागूपदार्थको दुर्व्यसन जस्ता विषयहरूमा पढाउने कक्षा पनि फेला पार्न सक्नुहुन्छ, त्यसैले तपाइँले यी परामर्शहरू तपाइँको परामर्श तालिका वरिपरि बनाउने योजना गर्नुपर्दछ।
एक स्कूल काउन्सलरको काम र कार्यहरू उनीहरूले समर्थन गर्ने विद्यार्थीहरूको आवश्यकतामा निर्भर गर्दछ। तपाईं एक विद्यार्थीको सीप, लक्ष्य, चासो, कमजोरी र शक्तिहरूको मूल्या will्कन गर्नुहुनेछ, र तिनीहरूको लागि उत्तम कार्य गर्ने कक्षा चयन गर्न तिनीहरूलाई मद्दत गर्नुहोस्। तपाईं तिनीहरूको वर्ग तालिका आयोजनको लागि जिम्मेवार हुन सक्नुहुन्छ। शैक्षिक समर्थनको साथ साथै तपाईंले उनीहरूलाई विभिन्न भावनात्मक, सामाजिक, व्यवहारात्मक र मानसिक मुद्दाहरूको सामना गर्न सक्नुहुनेछ जुन उनीहरूले सामना गर्न सक्दछन्। यो पहिचान गर्न र दुरुपयोग वा उपेक्षा रिपोर्टिंग, बदमाशी, ड्रग्स वा मदिरासँग कारोबार सम्मको सीमा हुन सक्छ। तपाईले विद्यार्थी र अभिभावकलाई अन्य पेशेवर र अन्य सहयोगी र समर्थनको लागि सन्दर्भ गर्न सक्नुहुनेछ।
तपाईं कसरी एक बन्न सक्नुहुन्छ?
एक स्कूल सल्लाहकार बन्न मानक मार्ग परामर्श वा मनोविज्ञान वा शिक्षा जस्ता सम्बन्धित विषयमा स्नातक डिग्री शामेल छ। शिक्षकहरूको लागि स्कूल सल्लाहकार बन्न यो धेरै सामान्य छ, किनकि उनीहरूसँग पहिले नै आवश्यक धेरै सीपहरू छन्, जस्तै सिकाउने क्षमता र युवा मानिसहरूलाई सहयोग गर्ने जुनसुकै। केही क्षेत्रहरूमा, स्नातक डिग्री न्यूनतम आवश्यकता हुन्छ, तर अरूमा तपाईलाई मास्टर डिग्री आवश्यक पर्दछ। यो जहाँ स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर तपाईंको क्यारियर अगाडि बढ्न मद्दत गर्न सक्छ। एक पटक तपाईंसँग सही योग्यताहरू भएपछि, तपाईंले आफ्नो काम सुरू गर्नु अघि इजाजतपत्र परीक्षा पास गर्न आवश्यक पर्दछ।
स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर इंटर्नशिप र रेसिडेन्सीहरु को अवसर प्रदान गर्दछ, जुन व्यवहारमा तपाइँको ज्ञान र सीप राख्न र व्यावहारिक काम अनुभव प्राप्त गर्न को लागी राम्रो तरिका हो। तिनीहरू पनि नेटवर्क मा र उद्योग मा सम्पर्क प्राप्त गर्न को लागी एक शानदार तरीका हो, र धेरै व्यक्ति कम्पनी वा मान्छे को लागी काम गर्न समाप्त हुन सक्छ कि तिनीहरूले अन्तर्निहित। स्कूलमा भर्ना हुने विद्यार्थी संख्या बढ्दै छ, जसको मतलब स्कूल सल्लाहकारहरूको माग पनि बढिरहेको छ।
यसबाहेक, त्यहाँ मास्टरको स्तरमा अध्ययन गर्न धेरै फाइदाहरू छन्। तपाईं ज्ञान, स्रोत र अनुभवमा पहुँच प्राप्त गर्नुहुनेछ जुन तपाईंलाई कुनै अन्य तरिकाले उपलब्ध नहुन सक्छ। मास्टरको स्तरमा डिग्रीले तपाईंलाई रोजगार आवेदकहरूको पोखरीमा उभिन मद्दत गर्दछ तपाईंलाई उच्च-स्तरीय रोजगारहरू र बढि तलब प्राप्त गर्न मद्दत गर्दछ। एक पटक तपाईले आफ्नो मास्टर डिग्री पूरा गरे पछि तपाईले आफ्नो अध्ययन पीएचडी स्तरमा जारी राख्नको लागि पनि छान्न सक्नुहुन्छ।
किन अनलाइन अध्ययन गर्ने?
स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर मात्र परामर्श पेशा सम्बन्धित गहिरो कौशल र ज्ञान प्रदान गर्दैन, यसले तपाईंको व्यक्तिगत सीप विकास गर्न पनि मद्दत गर्न सक्छ। सफ्ट कौशल एक स्थानान्तरण योग्य, गैर-तकनीकी व्यक्तिगत कौशलहरूको सेट हो जसले तपाईंलाई कार्यस्थलमा उभिन र सफल हुन मद्दत गर्दछ। तिनीहरूमा सञ्चार, टीम वर्क, रचनात्मकता, समस्या समाधान र आत्म-प्रेरणा जस्ता सीपहरू समावेश छन्। जबकि यी कुनै पनि उद्योगका लागि उपयोगी सीपहरू हुन्, केही विशेष रूपमा सल्लाहकारहरूको लागि उपयोगी छन्।
जब तपाईं अनलाइन सिक्नुहुन्छ, तपाईं अनौंठो अध्ययनले ल्याउने अनौठो चुनौतीहरूलाई पार गर्दै यी धेरै कौशलताहरू विकास गर्ने मौका तपाईंसँग हुनेछ। तपाईं अविश्वसनीय संगठित हुनु आवश्यक छ, विशेष गरी यदि तपाईं आफ्नो काम वा पारिवारिक प्रतिबद्धताहरूको साथ अध्ययन गर्दै हुनुहुन्छ भने। उच्च स्तरमा आफ्नो अध्ययन पूरा गर्न आफैलाई उत्प्रेरित गर्न सक्षम हुनुले तपाईंलाई भविष्यमा प्रयोग गर्नको लागि धेरै ठूलो अध्ययन र कार्य गर्ने बानी प्रदान गर्न सक्छ, जस्तै तालिका बनाउने, लक्ष्यहरू सेट गर्ने र अलमल्याउने हटाउने। तपाईंको अध्ययनको बखत, तपाईं यी कौशलहरूमा सबै समयमा काम गर्दै हुनुहुन्छ, र तपाईंले पहिल्यै यी मध्ये धेरै पाउनु हुनेछ, तर ती पनि अनुकूलन र सुधार गर्न सकिन्छ। एक अन्तर्वार्ता सेटिंग मा, तपाईं व्यावहारिक उदाहरण दिन सक्नुहुन्छ जब तपाईं यी नरम सीपहरू प्रयोग गर्नुभयो, सम्भावित रोजगारदाताहरूलाई प्रभाव पार्न। तपाईको संगठन र समय प्रबन्धन सीप विशेष गरी महत्त्वपूर्ण हुन्छ जब तपाई घर मा सिक्दै हुनुहुन्छ, किनकि तपाईले यो सुनिश्चित गर्नु पर्छ कि तपाई कुशलतासाथ सिक्दै हुनुहुन्छ र तपाईको ध्यान विकर्षणको व्यवस्थापन गर्दै हुनुहुन्छ, कुनै शारीरिक कक्षाकोठा वा त्यहाँ कुनै शिक्षकको साथ तपाईको निगरानी गर्न।
तपाइँको अनलाइन कोर्स अध्ययन गर्दा तपाइँको वास्तविक स्थान पनि धेरै कम महत्त्व राख्छ। यदि तपाइँको स्थानीय शैक्षिक संस्थाले तपाइँलाई चाहिने योग्यता कोर्स वा स्तर प्रदान गर्दैन भने, यसले तपाइँको क्यारियर योजनाहरूमा गम्भीर डिम्पेनर राख्न सक्छ। यसले तपाईलाई केहि अरु पनि अध्ययन गर्नु पर्ने हुन सक्छ, वा केहि पनि छैन। टाढाबाट सिक्दा, तपाईं आफ्नो घरबाट धेरै बिभिन्न संस्थाहरूबाट शिक्षा पहुँच गर्न सक्नुहुनेछ। स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर शिक्षा को स्तर को धेरै मानिसहरु को व्यापक सीमा को लागी बनाउँछ।
स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर पनि अधिक लागत प्रभावी विकल्प हुन सक्छ जब यो मास्टरको शिक्षाको कुरा आउँछ। एक मुख्य कारण यो हो कि मानिसहरूले थप शिक्षा लिदैनन् भन्ने हो कि यो अविश्वसनीय रूपमा महँगो हुन सक्छ, र त्यसकारण, आर्थिक हिसाबले अयोग्य। अनलाइन कोर्सहरू प्राय तिनीहरूको स counter्गत भन्दा सस्तो हुन्छन्। तपाई घरमा पैसा पढाउँदा पनि पैसा बचत गर्न सक्नुहुनेछ किनकि तपाईलाई क्याम्पसमा बस्ने ठाउँ खोज्नु वा नजिकको चिन्ताको चिन्ता गर्नु पर्दैन, न तपाईले दैनिक यात्रा गर्नु पर्छ। त्यहाँ तपाईंको सिक्ने शैली र वातावरणमा नियन्त्रण गर्न सक्ने क्षमता पनि छ, जुन तपाईंको अनुभवलाई रमाईलो र समृद्ध तुल्याउन सक्छ। घरबाट सिक्नु भनेको तपाईं कस्तो किसिमको सिकारु हुनुहुन्छ भनेर राम्रोसँग काम गर्ने राम्रो अवसर हो, साथै बानीहरू बसाल्नको लागि जुन तपाईंलाई भविष्यमा कुनै नयाँ कुरा सिक्नुपर्दा नयाँ जानकारी लिन मद्दत पुर्‍याउँछ।
एक स्कूल सल्लाहकार बन्न एक मांग र कडा प्रक्रिया हो कि उच्च स्तरको प्राविधिक र व्यक्तिगत सीप र ज्ञानको आवश्यकता हुन्छ। यो अविश्वसनीय रूपले इनामदायी र महत्त्वपूर्ण पनि छ किनकि धेरै विद्यार्थीहरूको लागि स्कूल अत्यन्त गाह्रो समय हो, र स्कूलका सल्लाहकारहरूले धेरैलाई मूल्यवान् सहयोग र हेरचाह प्रदान गर्दछन्। यो एक विविध भूमिका हो कि तपाइँ सम्भव सबै भन्दा राम्रो स्तरको समर्थन प्रदान गर्न सहयोग गर्न तपाइँको सबै प्राविधिक ज्ञान र व्यक्तिगत सीपहरूको प्रयोग गर्दछ। स्कूल परामर्श मा एक अनलाइन मास्टर तपाईंको परामर्श क्यारियर यात्रा जारी राख्न वा स्कूल परामर्श मा एक क्यारियर मा स्विच एक उत्तम तरिका हो। यो लागत प्रभावी र लचिलो छ र तपाईंलाई आफ्नो गतिमा अध्ययन गर्न अनुमति दिन्छ तपाईंको पूर्व अवस्थित प्रतिबद्धताहरू जस्तै काम वा परिवारको रूपमा।
अब तपाईले शीर्ष मुद्दाहरूसहित सुसज्जित हुनुहुन्छ जुन स्कूल सल्लाहकार बन्ने निर्णय गर्ने बाटोको आकलन गर्दा तपाईले विचार गर्नुपर्ने।